Shiinaha Shiine la kariyey oo wax ku ool ah oo fudud oo ah lowska cuntada Z nooca C warshad xamuulka wiishka wiishka baaldi | Xidhmada King
1.8L/ 6L/ 10L (oo ay ku jiraan 1 outlet)/ 3.8L (oo ay ku jiraan 1 ama in ka badan)
304 birta aan birta lahayn/ kaarboon
Dhammaan qaybaha waxay leeyihiin daboolida kormeerka ka saarida oo sahlan iyo daaqadaha kormeerka meelaynta oo sahlan. Baaldigu wuxuu leeyahay farsamo siidayn deg -deg ah oo si degdeg ah loogu rakibo ama looga saaro baaldiga. Wiishashka oo dhan waxaa lagu qalabeeyaa sibraar otomaatig ah iyo ilaalin xad-dhaaf ah oo la dhisay.
Maaddada laga bilaabo hoose ilaa sare, xaqiijinta gaadiidka qumman.
1. Hopper wuxuu ka samaysan yahay caaryada ka samaysan walxaha PP-ga ah ama 304 alaab birta aan lahayn.
2. Si dhakhso ah ayaa loo kala qaadi karaa, nadiifin habboon.
3. Xawaaraha waa la hagaajin karaa wakhti kasta si loo xakameeyo xawaaraha qaadista.
4. Qaab dhismeedka nooca sanduuqa, oo si sahlan loo soo ururin karo.
5. Qaabdhismeedka fayadhowrka, qaabaynta waarta, dhererka qaadista sare, awoodda gudbinta weyn.
6. Iska caabinta daxalka, xidho iska caabin, daboolo meel yar.
7. Way fududahay in la hawlgalo, qasnaddu waa sahlan tahay in la helo.
8. Wuxuu u baahan yahay dayactir hoose.
9. Hawlgal lagu kalsoonaan karo iyo isticmaalka tamarta oo hooseysa.
10. Waxaa loo habeyn karaa hadba baahida macmiilka.
11.Can ayaa lagu dari karaa qalabka kale ee taageeraya walxaha gudbinta otomaatiga ah ee joogtada ah ama aan kala go ’lahayn. Si loo gaaro qalab isku mid ah oo lagu quudiyo qalabka wax lagu cabbiro ama lagu quudiyo.
1. Maaddada jirka: 304# birta aan birta lahayn/ kaarboon.
2. Qalabka baaldiga ： Caaga/ birta aan birta lahayn/ birta titanium.
3. Goobaha maaddada. : hal ama dhowr.
4. Macaamiishu waxay u habayn karaan hadba baahidooda.
Hore: Ku -adkaysiga Heerkulka Sare Tayada sare ee Heerka Cuntada Gawaarida PU Belt -ka
Xiga: Machine xirxirida
Shiinaha Factory xawaaraha hagaajin karo qudhmay ...
Caabiga Heerkulka Sare Cunto tayo sare leh ...
Dahaarka iska caabin Acid suunka PVC siman ...
Suunka xoqaya ee PP oo kor u qaadaya conveyor ea ...
304 Ahama Steel PP/ PVC/ PU ​​produc dhammeeyey ...
Z wiishka baaldi, Gudbinta Silsiladda, Wiishashka Cuntada, Wiishka baaldiga ee rogaya, Xamuulka Fayadhowrka, Wareega Suunka Gubashada,